Fifampiarahabana taom-baovao 2010 SAMPATI XIII – FJKM Ambavahadimitafo Fifampiarahabana taom-baovao 2010 SAMPATI XIII |
Fifampiarahabana taom-baovao 2010 SAMPATI XIII
Ho fanohizana ny fankalazana ny Jobily faha-60 taona, ny SAMPATI XIII dia hanatanteraka fifampiarahabana taom-baovao 2010 ny Sabotsy 6 feborary 2010 ao an-tokantranon’ny Tily tranainy Rakotomalala Samuel mianakavy eny Antsahabe.
Manasa an’ise Mpanazava sy Tily am-perin’asa rehetra, Mpanazava sy Tily tranainy rehetra miaraka amin’ny vad aman-janany, ny tonia sy nykomitim-pivondronana ary ireo sakaizan’ny Mpanazava sy Tily eto Ambavahadimitafo. Iangaviana mba hifanentana sy hanatrika ay handray anjara mavitrika amin’izany ka ho maro hatrany isika hankalaza ny Jobily faha-60 taona.
Ny fotoana dia hanomboka amin’ny 10 ora maraina ka hatramin’ny 4 ora hariva.
Mialoha izany dia hisy ny fivoriamben’ny Komity rehetra manomboka amin’ny 9 ora tsy diso.
– Ny Komitim-pivondronana tsirairay dia hitondra tsakitsaky
– Ny Tranainy tsirairay dia hitondra ranom-boankazo 2 tavoahangy lehibe
– Ny am-perin’asa tsirairay dia hitondra vatomamy
– ny tsirairay izay manana badge kosa dia hitondra sakafo antoandro sahaza ary hitondra stylo iray hanaovana « echange de cadeau »